Jobily faha 120 taonan’ny Paroasy (1898-2018) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
« Misaora an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra »
Tsangambato lehibe no najoro ary ho lova apetraka ho an’ny fiangonana sy ny taranaka rehetra mifandimby, dia ny Tranon’ny Pretra. Notsofina rano sy notokanana tamin’ny famaranana ny taon-jobily, ny alahady 17 febroary 2019 teo izy io. Monseigneur Ludovic Rabenantoandro, Vikera Jeneraly, no nitarika sorona masina ho fisaorana an’Andriamanitra. Notronon’ny Réverend Père Aubin Zacharie Rafidiarisoa, Curé-n’ny Disitrikan’Alasora sy ny Révérend Père Germain Befanivana, Vice Provincial-n’ny Redamptorista eto Madagasikara.
« Misaora an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra » 1Tes 5,18. Io teny io no nentina indrindra nisaorana an’Andriamanitra tamin’izao jobily izao. Zava-dehibe tokoa izany vanim-potoana lava niainan’ny Fiangonana izany. Maro ny pretra sy ny mpitantana izay efa nifandimby tao anatin’izay fotona izay. Nitso-drano ny trano ny vikera jeneraly ary nirary soa ny kristianina sy nisaotra tamin’ny ezaka vita tamin’ny fanaovana izao fotodrafitrasa lehibe izao. Ny filohan’ny Filan-kevitra Pasitoraly, Fano Ranaivoarivelo kosa dia nanolotra fisaorana an’ireo nifanome tanana sy niara-nisalahy tamin’ny fanatontosana izao. Nisaotra ny kristianina rehetra ihany koa tamin’ny tolo-tanana. Nanantitra ny fisaorana koa ny filohan’ny jobily faha-120 taona, Alain Ramamonjy. Notronon’ny avy ao amin’ny FFVA sy ny VEME ary ny Disitrika Alasora ny fankalazana